Imaaraatka iyo Sacuudiga oo cambaareeyey Go’aanka Qatar – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Imaaraatka iyo Sacuudiga oo cambaareeyey Go’aanka Qatar
Beegsonews-Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhalleeceysay Dowladda Qatar diidmadeeda natiijadii kasoo baxday wada-hadalladii ku saabsanaa xiisadda gobolka iyo Iran ee dhowaan ka dhacay magaalada Makkah, halka Imaaraatka ay ku Eedeeyeen Doha inay dib uga guratay natiijada shirka.
Qatar oo ka qeyb-gashay kulamo saddex maalmood socday oo ka dhacay magaalada barakeysan ee Makkah, ayaa Axaddii ku gacan seertay qodobada kasoo baxay, ayada oo sheegtay inaan lagala tashan.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibedda Sacuudiga, Adel al-Jubeir ayaa u jawaabay Qatar.
“Dalalka waxay inta ay socdaan shir madaxeedyada ku dhowaaqaan mowqifyadooda iyo waxyaabaha ay diidan yihiin sida caadada ah ee ma aha kadib shirarka” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay twitter.
Sidoo kale wasiiru dowlaha arrimaha dibedda Imaaraadka, Anwar Gargash ayaa ku dhalleeceeyey Qatar inay tahay mid tabar-darran oo aan xamili karin cadaadiska.
“Waxay iila muuqataa in ka qeyb-galka shirarka iyo heshiisyada lagu gaaro kadibna laga laabto wixii la go’aamiyey ay tahay natiijada cadaadiska saaran dal aan madax-banaaneyn ama aan la isku haleyn karin” ayuu yiri.
Qatar ayaa waxaa muddo laba sano ah saaran go’doon dhaqaale oo cir iyo dhul ah oo ay geliyeen dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrain.
Previous articleSomaliland iyo Puntland oo maxaabiis is-dhaafsaday(dhageysi)
Next articleDagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose
Kumaandooska Soomaaliya oo howlgalo ballaaran ka wada Sh/Hoose